शीर्ष नेताले नै चुनाव हारे के हुन्छ ? ‘रिङ आउट’को जोखिममा प्रभावशाली नेता – Etajakhabar
शीर्ष नेताले नै चुनाव हारे के हुन्छ ? ‘रिङ आउट’को जोखिममा प्रभावशाली नेता
काठमाडौं, कात्तिक २४ -१० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केही शीर्ष नेता ‘रिङ आउट’को जोखिममा देखिएका छन् । एकै क्षेत्रबाट निर्वाचनमा होमिएका वाम गठबन्धन वा कांग्रेसका शीर्ष नेतामध्ये कुनै एकले मात्र संसद्को यात्रा तय गर्नेछन् । यो खबर विधुर ढकालले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक २४, २०७४ समय: ७:३८:४३